Perikopa (Mg)| Page 24
Fiombonam-bavaka Alahady VII alohan’ny Paska Herinandro 27 Febroary – 04 Marsa 2017
26 février 2017 by mpiandraikitra	Leave a Comment
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VII alohan’ny Paska Herinandro 27 Febroary – 04 Marsa 2017 “Andriamanitra mampahery ny olony ” * Fitarihan-kevitra: Sarobidy sy tena ilaina ny hery amin’ny lafim-piainan’ny olona manontolo. Hery hiasana, hiadiana amin’ny ratsy, handresena fahalemena, hanoherana ny devoly fahavalo. Anefa koa hery hanaovana soa sy asa tsara, hitiavana ny … [Read more…]
Herinandro 20 – 25 Febroary 2017 “ Matokia ny tenin’Andriamanitra ”
20 février 2017 by mpiandraikitra	1 Comment
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VIII alohan’ny Paska Herinandro 20 – 25 Febroary 2017 “ Matokia ny tenin’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : Matokia ny tenin’Andriamanitra satria Mahatoky Izy ka mendrika ny hitokisana. Fa nomen’Andriamanitra tokim-pitahiana ny Isiraely olony fahizay satria very toky izy noho izy nolazoin’ny fahababoana fotoana naharitra tany Babylona. Fa fampahoriana … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Epifania Herinandro 13 – 18 Febroary 2017
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Epifania Herinandro 13 – 18 Febroary 2017 “ Ny mino miorina amin’ny finoana ” * Fitarihan-kevitra: Andro fizahana toetra ny finoana ankehitriny, ka mifanesy ny tafiotra hampisamboaravoara ny sambokelin’ny finoan’ny kristiana. Sahirana izay marivo salosana, mandray am-bovony fa tsy maka fototra, na koa miorina amin’izany. … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 06 – 11 Febroary 2017
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 06 – 11 Febroary 2017 “ Ny mino matoky an’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Toetra maha-mpino ny mino ny matoky an’Andriamanitra. Tsy ny “haben’ny finoana” anefa no voalohan-daharana amin’Andriamanitra, fa ny fahamarinany. Fa hoy ny Tompo: “Raha manana finoana na dia hoatra ny voan-tsinapy … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 16 – 21 Janoary 2017
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 16 – 21 Janoary 2017 “ Ny Mesia tonga hanompo ” * Fitarihan-kevitra: Ny Mesia no Iraka voahosotr’Andriamanitra mba hanao fanompoana mitondra fanavotana ho an’ny olona. Tanteraka taminy ny tenin’ny mpanao Salamo manao hoe: ”Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 09-14 Janoary 2017
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 09-14 Janoary 2017 “ Ny taona ankasitrahan’i Jehovah ” * Fitarihan-kevitra: Ny Taona Vaovao dia irariana ho taom-pahasoavana, ho taon-jina, ho taom-pahombiazana amin’ny antony sy lafimpiainan’ny olona rehetra. Kanefa tsy tanteraka izany raha tsy ao amin’Andriamanitra ary miaraka amin’i Jesosy. Fa “Raha tsy … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017 ”Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Epifania, Taom-baovan’Andriamanira, satria ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Mesia, na Epifania, dia ny hitondra fanavaozana ho famonjena. Izany dia araka ny teny faminaniana izay nampilazaina an’Isaia mpaminany ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah manao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016
26 décembre 2016 by mpiandraikitra	Leave a Comment
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016 « Miatrika ny Taona Vaovao » Fitarihan-kevitra: Maro ny faniriantsika olombelona ho amin’ny Taona Vaovao. Izany dia azo fehezina amin’ny hoe ”fahasoavana, fitahiana, fahombiazana, fahasalamana”. Te-hahazo andro lava iainana va hianao? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa na iza na iza maniry fiainana … [Read more…]
« Précédent 1 2 3 4 5 … 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Suivant »